Sidee ayay warbaahinta dunida u tebineysaa doorashada Mareykanka? | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Sidee ayay warbaahinta dunida u tebineysaa doorashada Mareykanka?
Suurtogalnimada ah rabshado ka dhaca Mareykanka, sababo la xiriira doorashada aan weli kala caddeyn, ayaa saldhig u ah tebinta warbaahinta dhowr dal. Meelaha qaar, waxaa arrintan looga gol leeyahay in lagu wiiqo Mareykanka.
“Madaxweynaha Mareykanka wuxuu sameynayaa sheegashooyin aan caddeyn loo heyn wuxuuna sheeganayaan inuu doorashada ku guuleystay,” ayuu yiri Allgemeine Zeitung oo faallo ku qora wargeyska Frankfurter ee dalka Jarmalka.
Mareykankan “wuxuu cagta saaray xasaraddii ugu weyneyd ee dowlad iyo siyaasad ahaan tan iyo intii uu Richard Nixon is casilay”, ayaa lagu yiri wargeyskaEl Mundo ee dalka Spain.
Sawir-gacmeed lagu daabacay barta Daily Maverick ee dalka Koofur Afrika wuxuu tusinayaa Donald Trump oo toorrey ku haya taallada xornimada oo ay la socoto hanjabaad.
Waxaa sidoo kale jira warbaahinta qaar oo tebinaya in Joe Biden uu ku horreeyo codadka, iyo waxa ay taas ka dhigan tahay.
Gudaha Afghanistan, wargeyska Rah-e Madaneyat ayaa is weydiinaya su`aasha ah: “Guusha Trump ma waxay ka dhigan tahay guusha Taliban? Guusha Biden-se ma waxay ka dhigan tahay sii socoshada jamhuuriyadnimada Afghanistan?”
Nin faallo ku qoray barta telefishinka Al-Mayadeen ee dowladda Iiraan taageera ayaa sheegay in dalalka Gacanka ay isha ku hayaa in “bisha malabka ee Trump” ay sii socon doonto iyo in kale.
Previous articleEgypt Ethiopia iyo Sudan oo ka heshiin waayay khilaafka wabiga Nile
Next articleXafiiska ololaha doorashada Trump oo labo dacwadood ka gudbiyay natiijada gobollada Michigan iyo Pennsylvania oo labaduba uu ku guuleystay Joe Biden.
Waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha maanta loo doortay maamul goboleedka Hirshabeelle, Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen "Cali-Guudlaawe iyo Madaxwayne ku xigeekiisa Yuusuf Axmad Hagar, waxaanna Eebbe...
Amar uu bixiyay Cali Guudlaawe oo lagu xiray 34 qof